Mukwende Strap & Belt Fekitori - China Mutoro Sungira & Belt Vagadziri uye Vatengesi
Tambo dzekutakura dzakakosha kwazvo kuti mukwende urambe uripo. Hazvina mhosva kushandisa mota dzakavanzika, zvitima kana ndege, sutukezi inosvinwa zviri nyore, mukwende uri musutukesi unenge wakura. Izvo zvinonetsa chaizvo. Nerubatsiro rwetambo dzemikwende, inowedzera simba rekunze kusutukesi kugadzirisa mukwende. Maitiro ekusiyanisa sutukesi yako munzvimbo dzinowanikwa veruzhinji, vamwe vangangoshandisa masutukesi emhando imwe chete uye nemavara mamwe chete, unogona kusiyanisa sutukesi yako nerubatsiro rwemabhandi emikwende. Ndiro rimwe basa. Mukuwedzera, inogona kuwedzera mucherechedzo kumatambo emikwende. Ipapo tambo dzemikwende dzinogona kushandiswa sezvipo zvekupa kune vafambi. Ndege dzinosarudza kune urwu rudzi rwezvipo zvekupa. Bhandi rinogadzirwa riine 2 inches paupamhi, kuve nechengetedzo buckle yekuchengetedza mukwende zvakachengeteka kuvharwa. Zvinhu zvakasiyana siyana zvinogona kusarudzwa senge polyester, nylon & yekuteedzera zvinhu zveNylon. Pakati pezvinhu izvi, zvinhu zvenylon zvine mhando yepamusoro uye yakasimba. Kuteedzera nylon ndiyo inotevera uyezve ndiyo polyester zvinhu. Iyo inogona kuita sarudzo inonzwisisika uchifunga mashandisiro ayo uye mutengo wayo. Maitiro akasiyana anogona kushandiswa pane logo senge silkscreen kudhinda, CMYK kudhinda, embossed imprinting, yakarukwa uye nezvimwe.